Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala owe-SACP | News24
Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala owe-SACP
ISITHOMBE: SITHUNYELWEUMnu Mhlengi Khumalo nowayenguNobhala we-SACP eVubamasi.
BAVELE eNkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu abasolwa abathathu abasolwa ngokubulala lowo obengunobhala we-SACP egatsheni laseVubamasi ka-Ward 10 endaweni yaKwaPata.
UMnu Mbuso Africa Mkhize (29),Sizwe Sibiya (46) kanye noThabane Sibiya (24) babhekene namacala ahlukene okubalwa kuwona nelokubulala uMnu Mhlengi Khumalo.
UMnu Khumalo wadutshulwa ngentulwane yezinhlamvu mhla zili-12 kuNhlolanja (February) ngesikhathi esekhaya lakhe endaweni yaKwaPata.
Abasolwa baboshwe ngoLwesine olwedlule ithimba elibhekelele ukubulawa okuhlangene nepolitiki esifundazweni saKwaZulu-Natal.
Lowo omele umbuso uNks Rene Padayachee uveze ukuthi umbuso uyaphikisana nokuthi abasolwa badedelwe ngebheyili.
Uthe amacala abhekene nabasolwa abucayi kakhulu wathi futhi amacala anjengalawa aseyinsakavukela umchilo wesidwaba kule ndawo.
“Isimo asikho sihle endaweni yaKwaPata ikakhulukazi njengoba sekubhekwe esikhathini sokhetho ngenyanga kaNhlaba (May). Umbuso kusamele uqinisekise nokuphepha kofakazi bombuso. Kumele kuphinde kuqinisekiswe nemininingwane yabo abasolwa nanokuthi awekho yini amacala ake abalahla ngaphambilini okanye abawahambayo,” kubeka yena.
UNks Padayachee uphinde waveza ukuthi umbuso kungenzeka ushintshe leli cala kugcine sekube icala lokubulala okuhleliwe.
Umphakathi ubuphume ngobuningi bawo ukuzokwethamela leli cala kanti namaphoyisa nawo okubalwa awophiko lwe-Public Order Policing (POP) nawo abekhona ukuzoqapha isimo.
Abasolwa bafike enkantolo bengenabo abameli nokungenye yezinto eyenze ukuba icala labo ligcine selihlehlisiwe. Umsolwa wokuqala kanye nowesibili bathe bona bazothola abameli abazimele kanti umsolwa wesithathu yena ucele ummeli wamahhala waka-Legal Aid wabe esemelwa uNks Gasa wakhona ka-Legal Aid.
Abasolwa ababhekene nje necala lokubulala kuphela, kodwa kukhona namanye okutholakala nezibhamu kanye nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Umsolwa wokuqala watholakala nesibhamu nezinhlamvu ezinhlanu ezingekho emthethweni, umsolwa wesibili watholakala nesibhamu nezinhlamvu ezisiyishiyagalombili (8) ezingekho emthethweni kwathi umsolwa wesithathu yena watholakala nesibhamu kanye nezinhlamvu ezimbili ezingekho emthethweni.
Icala labo lihlehliselwe umhla zili-19 kuNdasa (March) ukuze kuphenywe udaba lwabo lwebheyili nokuthi bafike nabameli babo.